समाचार - कसरी ट्युब्स टायर आकारको दायरा फिट गर्न सक्छन्?
आन्तरिक ट्यूबहरू रबरले बनेको हुन्छ र धेरै लचिलो हुन्छ। तिनीहरू बेलुनहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ कि यदि तपाईंले तिनीहरूलाई हावामा राख्नुभयो भने तिनीहरू विस्तार नै रहन्छन् आखिरमा तिनीहरू फुटेर जान्छन्! यो समझदार र सिफारिश गरिएको आकार सीमा भन्दा पर भित्री ट्यूबहरू फुकाउन सुरक्षित छैन किनकि ट्यूबहरू विस्तार भएपछि कमजोर हुँदै जान्छ।
धेरै जसो भित्री ट्युबले सुरक्षित रूपमा दुई वा तीन फरक टायर आकारहरू सुरक्षित गर्दछ, र यी आकारहरू अक्सर भित्री ट्यूबमा या त भिन्न आकारका रूपमा चिनो लगाइनेछ, वा दायराको रूपमा प्रदर्शन हुनेछ। उदाहरणका लागि: ट्रेलर टायर भित्री ट्यूब १ 13 13 / १ 145 / १5-12-१२ को रूपमा चिन्ह लगाउन सकिन्छ, जसको मतलब यो टायर आकार १ for 13-१२, १55-१२ वा १55-१२ को लागि उपयुक्त छ। लन घाँस काट्ने भित्री ट्यूबलाई २X एक्स ..50० / १०.50०-१२ को रूपमा चिन्ह लगाउन सकिन्छ, जसको मतलब यो टायर आकार २ eitherX8.50०-१२ वा २X एक्स १०.50०-१२ का लागि उपयुक्त छ। एक ट्रयाक्टर भित्री ट्यूब १ 16..9-२4 र 20२० / 70०-२4 को रूपमा चिन्ह लगाउन सकिन्छ, यसको मतलब यो टायर आकार १ 16..9-२4 वा 20२० / 70०-२4 को लागि उपयुक्त छ।
आन्तरिक ट्यूबको गुणस्तर ग्यारेन्टी छ? आन्तरिक ट्यूबको गुणस्तर निर्माताबाट निर्मातामा भिन्न हुन्छ। प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर, कार्बन कालो र अन्य रासायनिक यौगिकहरूको मिश्रणले ट्यूबहरूको शक्ति, स्थायित्व र यो समग्र गुणस्तर निर्धारण गर्दछ। बिग टायरमा हामी निर्माणकर्ताहरूबाट राम्रो गुणस्तरको ट्यूबहरू बेच्छौं जुन वर्षौंको लागि परीक्षण र परीक्षण गरिएको छ। अन्य स्रोतहरूबाट भित्री ट्यूबहरू किन्दा सावधान हुनुहोस् किनकि वर्तमानमा बजारमा केहि न्यून गुणस्तरका ट्यूबहरू छन्। खराब गुणस्तरको ट्यूबहरू चाँडै असफल हुन्छन् र तपाईंलाई दुवै कम समय र प्रतिस्थापनहरूमा अधिक लागत दिन्छ।
मलाई कुन खालको खाँचो छ? भल्भहरू विभिन्न आकार र आकारहरूमा आउँदछन् र अनुप्रयोगहरूको विविध प्रकारको समायोजन गर्न र ह्विल रिम कन्फिगरेसनहरू। त्यहाँ चार मुख्य कोटीहरू छन् जुन भित्री ट्यूब भल्भहरू भित्र पस्छन् र प्रत्येक भित्रबाट छनौट गर्न लोकप्रिय भल्भ मोडेलहरू एक मुट्ठी हुन्: स्ट्रेट रबर वाल्भ - भल्भ रबरले बनेको छ त्यसैले सस्तो र टिकाउ हो। TR13 भल्भ सबैभन्दा सामान्य हो, कार, ट्रेलर, क्वाड, लन घास, र केही साना कृषि मशिनरीमा प्रयोग। यसमा पातलो र सीधा भल्भ स्टेम छ। TR15 सँग फराकिलो / फ्याटर वाल्भ स्टेम छ त्यसैले पा whe्ग्राहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन ठूलो भल्भ प्वाल हो, सामान्यतया ठूलो कृषि मेसिनरी वा भूमि विवाद। स्ट्रेट मेटल भाल्भहरू - भल्भ धातुको बनेको छ, त्यसैले उनीहरूको रबर समकक्षहरू भन्दा शक्तिशाली र अधिक बलियो छ। तिनीहरू प्राय: उच्च दबाव अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग हुन्छन्, र जब वाल्भलाई जोखिमले समातिन्छ / ढकढकाइको बढी जोखिम हुन्छ। TR4 / TR6 केहि quad मा प्रयोग गरीन्छ। सबै भन्दा आम TR218 हो जुन एक कृषि भल्भ हो धेरै जसो ट्र्याक्टरहरूमा प्रयोग गरिन्छ किनकि यसले पानीलाई रोक्ने अनुमति दिन्छ। बेन्ट मेटल भाल्भहरू - भल्भ धातुबाट बनेको हुन्छ, र यसमा फरक डिग्रीको झुम्का हुन्छ। बन्ड सामान्यतया टाल्दा पछाडि भल्भ स्टेमलाई जोखिममा पक्रनबाट जोगाउनु हो, वा स्पेस सीमित छ भने यसमा पा wheel्गो रिममा हिर्काउनबाट जोगिनको लागि हो। तिनीहरू ट्रक र सामग्री ह्यान्डलिंग मेशीनरी जस्तै फोर्कट्रक्स, बोरी ट्रालीहरू र व्हीलबरहरूमा सामान्य छन्। फोर्कलिफ्टहरू सामान्यतया JS2 भल्भ प्रयोग गर्दछ। बोरा ट्रकहरू जस्ता साना मेसिनरीहरूले टीआर use87 प्रयोग गर्दछ, र लोरिहरू / ट्रकहरूले टीआर as78 जस्ता लामो डाँठ भएको झुकाव भल्भहरू प्रयोग गर्दछन्। एयर / वाटर वाल्भहरू - TR218 भल्भ सिधा धातु भल्भ हो जसले पानी (साथै वायु) लाई पम्प हुन पानीलाई गिट्टीमा राख्ने टायर / मेसिनरीको लागि अनुमति दिन्छ। ती ट्र्याक्टर जस्ता कृषि मशीनरीमा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ।
अन्य प्रयोगहरूको लागि आन्तरिक ट्युबहरू - चर्या शिफ्ट्स, स्विमिंग ईटीसी इनर ट्यूबहरू उपयोगी उपयोगी चीजहरू हुन्, र प्रत्येक दिन हामी ती व्यक्तिहरूलाई सल्लाह दिन मद्दत गर्दछौं जुन उनीहरूलाई सबै प्रकारका प्रयोगका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसो भए तपाईलाई भित्री ट्याब चाहिन्छ खोलाको छेउमा, तपाईंको भित्री र्याफ्ट सृष्टि निर्माण गर्न, वा एक छिटो पसल विन्डो प्रदर्शनको लागि, त्यसो भए हामी सहयोग गर्न खुसी छौं। कृपया तपाईंको आवश्यकताको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस् र हाम्रो टीमले तपाईंलाई सही दिशामा देखाउनेछ। द्रुत सूचकको रूपमा, तपाईं ट्यूबको बिचमा भएको खाली ठाउँ / प्वाल हुन कति ठूलो चाहानुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस् (यसलाई रिम साइज भनिन्छ र यसलाई इञ्चमा मापन गरिएको छ)। त्यसो भए, मोटामोटी रूपमा निर्णय गर्नुहोस् कि तपाईं फुलेको ट्यूबको कुल व्यास हुन चाहनुहुन्छ (ट्यूबको उचाई यदि तपाईं त्यसलाई आफैंको छेउमा उभिरहनुभयो भने)। यदि तपाईं हामीलाई त्यो जानकारी दिन सक्नुहुनेछ भने हामी तपाईंलाई केही विकल्पहरूको लागि सल्लाह दिन सक्दछौं। कुनै पनि थप मद्दत र जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।